Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Magacaabista VIP ee eTurboNews » Prof. Geoffrey Lipman, SunX, Belgium
Magacaabista VIP ee eTurboNews
Geoffrey Lipman hogaamisa SUN. Hogaamiyihii hore ee ugu sareeyay IATA, WTTC iyo UNWTO, Geoffrey waa Madaxweynaha ICTP iyo Machadka Socdaalka Kobaca Cagaaran (GGTI), iyo sidoo kale borofisar booqasho ah oo ka tirsan Jaamacada Hasselt University, Belgium & Victoria University Australia
Horey Ex. Agaasime IATA: Madaxweynihii ugu horeeyay WTTC: Ass. Xoghayaha guud ee UNWTO. Waqtigan xaadirka ah, Madaxweynaha SUNx Malta - Shabakadda Caalamiga ah ee Strong waxay door muhiim ah ka ciyaartay soo ifbaxa Dalxiiska oo ah qayb dhaqan-dhaqaale oo halis ah.
• Isaga oo ah Agaasimaha Fulinta ee IATA 1970-meeyadii waxa uu gacan ka geystay wadista ajandaha xoraynta cusub, isaga oo ka jawaabaya xad-gudubka diyaaradda.
• Isagoo ahaa Madaxweynihii ugu horreeyay ee WTTC sannadihii 1990-meeyadii, waxa uu ka shaqeeyay in uu horseedo habab cusub oo lagu cabbiro qaybta, isaga oo abuuraya Shahaadada CSR iyo taageeridda dadaallada Shiinaha ee lagu furayo suuqyada Dalxiiska.
Kaaliyaha Xoghayaha Guud ee UNWTO, tobankii sano ee ugu horeysay kunkan sano, waxa uu hormuud ka ahaa hababka taageerada horumarineed ee cusub, oo uu ku jiro barnaamijka ST-EP, oo hogaaminayey Shirwaynaha Cimilada ee Davos, oo bilaabay barnaamijka aqoonsiga shirwaynaha G20.
• Sida aasaasaha SUNx Strong Universal Network – mashruuc dhaxal gal ah Maurice Strong Kani waa hindise caalami ah oo lagu taageerayo U adkaysiga Cimilada, la xidhiidha SDG iyo Jawaabta Degdegga ah iyada oo loo marayo Safarka Saaxiibtinimo ee Cimilada ~ Waxaa la qiyaasay: Cagaaran: 2050proof. Waxa uu ka shaqeeyay guddiyada qaybaha dadweynaha/gaar-ahaaneed ee Afrika, Yurub, Bariga Dhexe, iyo Kanada: Ergeyga Dalxiiska ee Maamulka UNDP; Xubin ka ah Guddiyada Midowga Yurub ee Xoraynta Hawada iyo Shaqaalaysiinta Dalxiiska:
La-taliyaha Deegaanka ee Guddoomiyaha Jeju Island, Kuuriya: Madaxweynaha ICTP (Isbahaysiga Caalamiga ah ee Dalxiiska Dalxiiska). Waxay si dhow ula shaqeysay Madasha Dhaqaalaha Adduunka ilaa horraantii 90-meeyadii oo ku saabsan tartankeeda iyo dhaqdhaqaaqyadeeda Safarka Wacan.
Qoraal/muxaadaro ballaaran oo ku saabsan istiraatijiyadda dalxiiska, waaritaanka & xoraynta; wada-qoraaga/ tafatiraha laba buug iyo maqaallo joornaal oo badan oo ku saabsan Kobaca Cagaaran & Socdaalka sida borofisar soo booqda, Victoria U. Australia, iyo Hasselt U. Belgium. Isku-dubbaridka laba daraasadood oo waaweyn oo EIU ah oo ku saabsan xoraynta hawada.
Wax badan oo ku saabsan Prof Geoffrey Lipman